Mpanamboatra sy mpamatsy trano firafitry ny rafitra vy - Orinasa famokarana vy any Shina
Trano fivoriambe miorina amin'ny trano prefab voaorina haingana
1.Building System Customised Warehouse raha manana sary sy famaritana teknika ianao dia tongasoa eto amin'ny fotoana rehetra. Ny tanjonay dia tsy ny hanome trano fananganana vy tena avo lenta ihany, fa koa hitazomana ny fifandraisana manokana sy matihanina amin'ny mpanjifa tsirairay. Na lehibe na kely ny zavatra takinao, dia hanao izay fara herinay izahay hamaly ny fangatahanao. Serivisy fijanonana iray avy amin'ny famolavolana, fanamboarana, hatolotra amin'ny fametrahana ary aorian'ny serivisy. 1.We dia afaka manamboatra hentitra araka ny ...
Trano fananganana vy maivana vita amin'ny vy azo alaina vita amin'ny indostrialy
1. Rafitra fananganana ● Azo itokisana kokoa ny asan'ny vy. Ny fotoana maharitra ampiasaina hatramin'ny 50 taona. ● Ny firafitry ny vy dia misy fiantraikany, miorina ary tsara manohitra ny seismika ny lanjany dia maivana. ● Rafitra vy ampiasaina amin'ny ambaratonga avo lenta amin'ny indostrialy. ● Ny firafitra vy dia azo atambatra haingana sy marina, mitahiry fotoana ary mitsitsy asa. ● Ny habakabaka anatiny misy ny firafitra vy na vy vy, ny halavan'ny vy an'ny prefab vy dia mety hahatratra 80 metatra. ● Mety hiteraka firafitra famehezana. ● Kanto ...
Vidiny ambany fananganana fananganana trano fananganana vy lehibe trano fananganana trano fanatobiana vy roa
1.Installation Ny firafitray vy vaovao dia mora kokoa ny mametraka azy, 2.000 metatra toradroa dia mety ho vita ao anatin'ny herinandro 1 ataon'ny mpiasa 5. 1) Ny vatan'ny vy lehibe (rafitra) dia mifamatotra amin'ny kofehy matanjaka avo lenta, tsy mila valaka eo an-toerana. Ny 'fametrahana azy dia mitovy amin'ny vato fananganana. (2) Karazana purlins 2 no ampiasaina amin'ny tafo sy ny rindrin'ny firafitry ny vy. (misy karazana purlins 4 farafahakeliny hampiasana ny tafo sy ny rindrin'ny fanamboarana hafa ...